12 Obodo kacha dị jụụ na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 12 Obodo kacha dị jụụ na Europe
Train Travel Britain, Train Travel Czech Republic, Train Travel Denmark, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Holland, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ njem Russia, Train Travel Switzerland, Train Travel The Netherlands, Train Travel UK, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 08/10/2021)
E nwere ọtụtụ ịtụnanya obodo ileta na Europe. Obodo ọ bụla na n'okporo ámá nwere agwa na ịma mma nke ha. Ihe dị egwu, juputara na nnukwu cafes, boutiques, n'okporo ámá nka, veranda nka nka, na eco-enyi na enyi, ma ọ bụrụ na ịnọghị na ndị a 12 ógbè ndị kasị dị jụụ na Europe, ndị a bụ ihe ole na ole mere ị ga -eji depụta listi ịwụ gị.
1. Obodo kacha dị jụụ na Europe: Neukolln, Berlin
N'ebe dị anya site na isi njem nleta na-adọrọ mmasị na Berlin, agbata obi Neukolln bụ ụlọ akwụkwọ n'onwe ya. Mpaghara dị jụụ bụ ngwakọta n'etiti ochie na nke ọhụrụ, ọdịbendị, mepere emepe, na oghere ndụ ndụ ntụrụndụ.
Kababs, art veranda, elu ụlọ Ogwe n'akụkụ ogige ntụrụndụ na -acha akwụkwọ ndụ na -eme ka agbata obi Neukolln bụrụ otu kachasị mma na Europe. Mgbe nnukwu ụbọchị dị n'èzí nnukwu Tempelhofer Feld, ma ọ bụ Ogige Britzer ị nwere ike ịga n'ihu n'obodo Richardplatz na -adịghị mma ma ọ bụ Klunkeranich na -adọba ụgbọala tụgharịrị mmanya ụlọ..
2. Ọrụ ije, Prague
Ogige ntụrụndụ Green, Ubi biya na nlele osimiri, nke dịkọrọ ndụ nka nka dị ole na ole n'ime ha ihe zoro ezo na Holesovice kacha dị jụụ na Prague. Holesovice bụ ebe ndị nka Czech na ezinụlọ ndị na -eto eto nọ, na -etinye oge ezumike ha na Letna Park na iri nri n'ọtụtụ bistros gburugburu.
Mpaghara mepere emepe na Prague agbanweela taa ka ọ bụrụ oghere okike maka ndị na -ese ihe na ndị nwere uche. Ya mere, Ọ bụghị ihe ijuanya na otu n'ime agbataobi kacha mma na Europe nwere ụlọ oriri na ọ quụirụ dị egwu, ụlọ ahịa imewe, na ebe nka.
3. Obodo kacha dị jụụ na Europe: Ostiense, Rome
Ostiense abụghị agbataobi Ịtali, mana nke ahụ bụ kpọmkwem ihe na -etinye ya n'ime 10 ógbè ndị kasị dị jụụ na Europe. A ụlọ ọrụ mbụ ghọrọ ụlọ ngosi nka, nka n'okporo ụzọ kama isi iyi, cafes ndị na -ewu ewu, na 1 ili ozu ndị na-abụghị ndị Katọlik ebe ndị na-ede uri ịhụnanya Keats na Shelley chọtara ebe ha na-ehi ụra ebighi ebi Ostiense adịghị ka mkpuchi ọzọ..
Ebe isi awọ nọ n'isi obodo Italy nwere ntakịrị ntakịrị ka ọ bụrụ ebe nwere agba na ihe okike doro anya. Ọzọkwa, ebe a ị nwere ike ịga na Pyramid pụrụ iche nke Caius Cestius wee nwee mmasị na frescos ya, na -aga Eataly maka nri Ịtali. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibi ndụ dịka onye obodo, Ebe obibi na Ostiense na -ewu ewu dị ọnụ ala karịa na mpaghara ndị njem nlegharị anya na Rome.
Na -agagharị gbadaa SoPi, gaa Rue des Martyrs, ulo gafere 200 cafes, chocolatiers, na ihe ntụchi, South Pigalle bụ ebe dị na Paris. Na mgbakwunye na South Pigalle bụ eluigwe nri nri, agbata obi dị jụụ bụ ebe ị nwere ike chọpụta ebe ngosi nka na nka dị ịtụnanya. Otu n'ime ebe ngosi ihe mgbe ochie pụrụ iche bụ ebe ngosi nka nke Ndụ ịhụnanya. Na Musee de La Vie Romantique ị nwere ike gbasaa ihe ọmụma gị gbasara oge ihunanya na akụkọ ntolite French.
Maka ezumike site na ibi ndụ dị mma, ị nwere ike banye n'ụlọ ikpe basketball basketball Pigalle. A na -arụzigharị ogige basketball Pigalle, e mere na agba doro anya, maka egwuregwu basketball kacha mma. Paris dị mma ebe ezumike na otu n'ime ọtụtụ ebe ezumike dị egwu na nnukwu ụlọ ikpe basketball na Europe.
5. Obodo kacha dị jụụ na Europe: Arbat, Moscow
Mpaghara Arbat mara mma ma na -enye ọmarịcha bụ ikuku na -eku ume n'etiti etiti obodo Moscow. Ị ga -ahụ Arbat nke amara, ya na ụlọ ndị mara mma, cafes, na nka okporo ụzọ. Ka ị na -agagharị na Arbat, ị ga -achọpụta mkpụrụ obi nke obodo mepere emepe. Okporo ụzọ Old Arbat a ma ama dị na Arbat Quarter dị na Moscow chekwara mkpa ya dị ka ebe ndị ahịa, site na narị afọ nke 15.
Naa, agbataobi Arbat juputara n'ọmarịcha ụlọ ahịa, ụlọ ahịa ihe ncheta, ọrụ aka, na ọtụtụ akụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ebe mpaghara a na -eme njem nlegharị anya, ị ga -ahụ ya ka ọ tọgbọ chakoo, na ihe nkiri. Maka ịnụ ụtọ nri Arbat kacha mma, tụọ ụbọchị ole na ole n'ime njem Moscow gị, opekempe. Ụzọ a, ị nwere ike inyocha ihe kacha mma Moscow na ịma mma nke otu n'ime ha ebe kacha dị ịtụnanya ileta na Russia.
6. 7nke Budapest District
Na -eto eto ma na -atọ ụtọ, Mpaghara nke 7 na Budapest bụ ihe ịtụnanya maka ndị njem. Ogwe ndị mara mma, ụlọ mgbapụ kacha mma na Budapest, ahịa mgbede, na mmemme omenala, obodo a na -ama jijiji mgbe niile, n'ụzọ dị mma. Mpaghara a mara mma bụkwa mpaghara ndị Juu na Budapest, ya mere ị nwekwara ike ịga na nnukwu ụlọ nzukọ, akara ala n'onwe ya.
Ọzọkwa, n'okporo ámá ochie abụrụla ebe na -eme nri maka imezigharị omenala ndị Hungary. Na mgbakwunye na ụlọ nri na ụlọ ahịa, ihe kacha adọrọ mmasị na 7mpaghara nke bụ mkpọmkpọ ebe. Na -eme mmemme agbamakwụkwọ ezigbo enyi gị, ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ bash na mmanya ochie ochie bụ ahụmịhe pụrụ iche naanị na mpaghara Budapest kacha mma.
Vienna na Budapest Na A Train
Prague na Budapest Na ụgbọ oloko
Munich na Budapest Na A Train
Graz na Budapest na ụgbọ oloko
7. Obodo kacha dị jụụ na Europe: Langstrasse Zurich
Atụgharịrị ka okporo ụzọ kacha ogologo, agbataobi Langstrasse dị na Zurich na -agbaji ihe niile ị maara gbasara obodo na -abịa ihe n'oge. Langstrasse bụ ajọ nwa Zurich, hip, adventurous, na -enwu ọkụ neon na -enwu enwu ma na -adị njikere ịme oriri mgbe niile. Langtrasse nwereebe nri na -ama jijiji, Ogwe, na klọb maka ihi ụra abalị, naanị buru ghota.
Ọzọkwa, agbata obi kachasị mma bụ otu n'ime ebe enyi LGBT kacha amasị na Europe. N'ebe a, ị nwere ike nweta oghere gị na ebe mmanya/ebe a na-eri nri Les Garcons nke LGBT, ọmụmaatụ. ikwubi, agbata obi a dị ịtụnanya anaghị arahụ ụra, ọ ga -elekọtakwa gị n'ọtụtụ ụlọ nri agbụrụ, ọzọ, na mgbe emechara ememme.
Oghere sara mbara, mara mma ije, na obodo nta mara mma, Amsterdam-Noord enwetala ihe niile. Ebe dị jụụ dị n'akụkụ Osimiri IJ, yabụ Noords na -enye ihe ịtụnanya ntụpọ picnic na egwu egwu na -ebi ndụ. Na mgbakwunye na amara ndị a niile, Amsterdam-Noord bụ ebe mgbaba kacha elu na Europe, maka ndị hụrụ adrenaline n'anya.
Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ karịa nọ n'ọrụ ezumike mgbe ahụ osimiri ahụ zuru oke maka ihe omume mpụga. Ịgba ígwè, na -agba ọsọ, na ọbụna ịnya ụgbọ mmiri, Osimiri IJ zuru oke. Isi okwu bụ na Amsterdam-Noord bụ obere ụwa Dutch n'ime obodo Amsterdam mara mma. Nhọrọ ndị ahụ enweghị njedebe, na ikuku dị egwu, ọ bụghị ihe ijuanya na ndị njem na -alaghachi n'otu n'ime mpaghara kacha mma na Europe.
9. Obodo kacha dị jụụ na Europe: Shoreditch London
Ọtụtụ ndị njem maara Shoreditch ekele maka ọmarịcha ahịa Brick Lane. Otú ọ dị, Shoreditch bụ ebe kachasị mma ịga zụọ ahịa maka iberibe pụrụ iche na nnukwu ụlọ ahịa nwere onwe ha. Nke a bụ naanị otu ihe atụ nke akụkụ pụrụ iche n'akụkụ agbama grafiti. Shoreditch nwere ike ọ gaghị abụ nke zuru oke, mana o nwere mkpụrụ obi nke ya.
Kpọmkwem n'ihi na Shoreditch abụghị mpaghara Bekee ama ama, ọ ghọọla ebe obibi maka ndị na -ese ihe na mpaghara. Na mgbakwunye, agbata obi a mepere emepe bụ ebe kacha mma ịnwale nri n'okporo ụzọ n'ahịa ma ọ bụ mmapụta, nweta ihe nkiri na sinima nke dị n'elu ụlọ wee chọọ ihe osise zoro ezo n'akụkụ nkuku. ikwubi, Omume pụrụ iche nke Shoreditch na -eme ka ọ bụrụ ebe kacha mma na London.
N'ọmarịcha ụsọ mmiri Scottish nwere echiche nke oke osimiri Atlantic, Findhorn bụ anwansi. Mgbe ọ dị na Morayshire, ụfọdụ na -akpọ ya mmezi, kama ịbụ agbata obi n'okwu obodo. Findhorn bụ ebe ezumike mara mma, ọkachasị njem ezumike oke osimiri. Ebe a, ị ga -ahụ ohere dị ukwuu maka egwuregwu mmiri ma ọ bụ izu ike n'akụkụ osimiri.
Ọzọkwa, Findhorn nwere obodo gburugburu ebe obibi dị ịtụnanya, na njem ntụrụndụ na -ewu ewu n'oge a. Akụkụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ a na -agbakwụnye ọnọdụ na -ewu ewu na mpaghara izu ike, yana nnukwu odida obodo na ikuku.
11. Obodo kacha dị jụụ na Europe: Vesterbro, Copenhagen
Onye ọ bụla na -ebi na Vesterbro ga -asị na agbata obi a mara mma nwere obere agbataobi dị nnọọ iche na ya. Otu bụ nwata, nduhie, na ozugbo mpaghara ọkụ ọkụ Copenhagen na nke ọzọ nwere ihe egwu French gbasara ya. Vesterbro juputara na iche, yabụ onye ọ bụla gara Copenhagen na nke mbụ ga -ahụ ihe dị ukwuu masịrị ha.
Yabụ, Vesterbro bụ otu n'ime mpaghara kacha dị jụụ na Europe n'ihi na o nwere ihe dị ịtụnanya inye mmadụ niile. Site na oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ruo ụlọ nri dị mma, boutiques mara mma, na ụlọ obodo Absalomlon ebe ị ga -eso ndị obodo rie nri, Obodo Vesterbro na -anabata nke ọma ma na -adị mfe. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na Vestrbro nọ n'elu 10 agbata obi kacha mma na Europe kwa afọ.
Mpaghara kacha ewu ewu na Milan, Porta Venezia na -akwado izu izu nke Milan wee mechie elu ya 12 ógbè ndị kasị dị jụụ na Europe. Art, Nri Italian, n'akụkụ akuku site na ebe ịzụ ahịa kacha mma na Milan, ma tọrọ ntọala Porta Venezia bụ obere Italy, pụọ n'ebe ndị njem nlegharị anya juru.
Port Venezia na-anya ọmarịcha ụlọ nka nke na-atụgharị villa, cafes, na ubi, dị ka ọmarịcha Giardini Publici. Nnukwu ihu ọchị nke Porta Venezia na -adọta ndị obodo, expats, na ndị njem ka ha kwụpụ, agwakọta, na oriri n'oge ngosi Milan Gay, na kwa ụbọchị ruo mgbe ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ a ngwụcha izu ụka na Milan, ka mma mee ya otu izu, opekempe.
Anyị na Save A Train ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem gị 12 ógbè ndị kasị dị jụụ na Europe.
Ịchọrọ ịdebanye post blọgụ anyị "12 kacha mma agbata obi na Europe" na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fcoolest-neighborhoods-europe%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)